Xukuumadda Federaalka ah oo ka soo horjeesatey doorashadii Madaxweynaha ee Jubaland • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Xukuumadda Federaalka ah oo ka soo horjeesatey doorashadii Madaxweynaha ee Jubaland
Xukuumadda Federaalka ah oo ka soo horjeesatey doorashadii Madaxweynaha ee Jubaland
May 16, 2013 - By: Hanad Askar
Booqashadii Raysalwasaare Saacid ee Kismaayo, Axmed madoobe oo ku soo dhaweeyey Dekadda Kismaayo
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Raysalwasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon, ayaa lagu sheegey in aysan suurtagal ahayn in Xukuumaddu aqoonsato Jubaland maadaama laba Madaxweyne ka dhasheen.
Shirkii bilowdey 28 Feberaayo 2013 ayaa malintii shalay (Arbaco) Madaxweyne loogu doortey Axmed Maxamed Islan in uu noqdo Madaxweynaha Jubaland, Barre Shire Adam (Hiiraale) oo ahaa hoggaamiye kooxeed horey muddo dheer uga talin jirey Kismaayo ayaa si lama filaan ah bishii hore ee Abril ku tegey magaalada Kismaayo, waxaana uu sheegey in uu u yimid Kismaayo booqasho caadi ah, maadama reerkiisi degan yihiin, isla maalintii shalay ee ergadii Shirka Jubaland dooratey Axmed Madoobe ayuu sheegtey Barre isagana in la doortey, inkasta oo aysan jirin cid ka markhaanti kacadey shirka lagu doortey, halka uu ka dhacay iyo saxaafadda goobjooga ka ahayn midna.
Xukuumadda ayaa arintan uga faa’ideysatey in uu qayb ka noqdo qodobada diidmada ah, waxa ka soo baxay shirka socdey muddada dheer kaas oo ahaa mid ay horeyba u diidaneyd, waxaana ay ku tilmaantey mid lagu marin habaabinaayo masiirka ummadda Soomaaliyeed, hoos ka akhri war-saxaafadeedka xukuumaddu soo saartey:
Ayadoo Ia llaalinayo dastuurka dalka ee qeexaya qaab-dhismeedka dawlad-goboleedyada dalka ee nidaamka federaaliga ah. Lana dhawrayo geedi socodka dawladaynta ee uu qeexayo Dastuurka Fedaraalaynta Qodobkiisa 49 aad.
Ayadoo lagu guda jiro dhamaystirka go’aankii dawladdaha urur goboleedka IGAD ee shirkii Addis Ababa Maajo 3, ee lagu go’aansaday in guddi dhiirigalin oo ka socda wadamada IGAD loo diro magaalada Kismaayo.
Ayadoo la tixgalinayo rabitaanka rasmiga ah ee shacbiga Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa gobolada Gedo, Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. Isla markaana laga taxadarayo xasiloonida iyo dib-u-xoreynta deegaanadada weli gacanta ugu jira kooxaha nabad-diidka ah.
Dawladda Faderaalka ah ee Soomaaliya waxay aad uga xuntahay sida loo jaah-wareershay masiirka hogaan ee shacabka Jubooyinka iyo in Kismaayo looga dhawaaqo labo madaxweyne 15 Maajo 2013. Sidaas daraadeed dawladdu waxay caddeynaysaa inaysan suurto gal u ahayn inay labo madaxweyne u aqoonsato maamulka Jubbaland.
Dawladdu waxay mar kale caddeynaysaa inay soo dhawaynayso dhismaha maamul goboleedyada ku yimaada qaabka sharciga waafaqsan kuna dhisan rabitaanka iyo midnimada shacabka deegaanka.
Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxay xoojinaysaa hawsha Guddiga Labada Golle ee loo xilsaray wada-xaajoodka iyo dib-u heshiisiinta gobolada Jubbooyinka. Waxayna maamulada degmooyinka, hogaamiyeyaasha dhaqanka iyo wax-garadka deegaanka ugu baaqaysaa inay si buuxda la shaqeeyaan gudigaas dawliga ah.
Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxay ku baaqaysaa in la illaaliyo xasiloonida, lagana dheeraado wax kasta oo caqabad ku noqon kara amniga iyo dib-u xoreynta dalka, iyo in loo hogaansamo sharciga dalka.